UNKSZ Thando Sibisi (32) waseMgungundlovu weYellow Couch okuyinkampani ye-interir decor nowashiya umsebenzi ayeqashwe kuyo ngoba efuna ukulandela iphupho lokuzimela ISITHOMBE: Sithunyelwe
OWESIFAZANE owaqoka ukushiya umsebenzi ayeqashelwe wona wavula ibhizinisi lokuhlobisa, uthi ukuthanda indlu enengaphakathi elibukekayo yikho okwaholela ekutheni angene kulo mkhakha osekuphele iminyaka emine ekuwo.
UNksz Thando Sibisi (32) weYellow Couch Concepts enamahhovisi eThekwini nehlobisa ingaphathi lendlu ephinde yakhe ifenisha yasendlini, uthe akazisoli ngokuthatha isinqumo sokushiya kumasipala ayeqashwe kuwo njengoba ibhizinisi lakhe libukeka lidlondlobala futhi enza umsebenzi obesekuneminyaka ephupha ngawo.
Uthe okumchaza ngomsebenzi wakhe ngukuthi udinga ukuthi axukuzise umqondo ngezinhlobo ezahlukene zefenisha okumele ayikhande kanjalo nezindlela ezintsha zokuhlobisa ingaphakathi lendlu ngezitayela ezisuke zingenisile.
“Lo msebenzi udinga ube nesikhathi futhi uphinde ube ngumuntu onobuchule nonobuhlakani njengoba uxukuzisana umqondo. Ukubona ozakwethu abakhombisa ubuhlakani ngezitayela zesimanjemanje ngezinye zezinto ezingigqugquzelayo ekutheni ngisebenze ngokuzinikela ngaso sonke isikhathi,” kusho uNksz Sibisi.
Eqhuba uthe amakhasi ezinkundla zokuxhumana ngezinye zezinto ezimgqugquzelayo zimnike amacebo amasha ezindlela zokukhanda ifenisha njengoba ebukela kuzona izinhlobo ezingenisile zezimpahla zazendlini.
LENA ngeminye yemisebenzi aseke wayenzela amakhasimende akhe uNksz Thando Sibisi. ISITHOMBE: Sithunyelwe
“Kulo nyaka kube nezingqinamba ezilinqandile ibhizinisi ukuthi likhule liphinde lisabalale ngendlela ebesihlele ngayo njengoba kuphoqeleke ukuthi sishiye indawo obekuzinze kuyo ihhovisi, sayosebenzela ekhaya ngenxa yezimo zemali ezisixakazisile. Yize sidlule kulobo bunzima ngiyakholwa ukuthi okwenzekile kusivule umqondo ekutheni siphinde sigxile nasekusebenziseni izinkundla zokuxhumana uma sidayisa izimpahla zethu kanjalo noma sikhangisa ngomsebenzi esiwenzayo. Lokho ngingakubeka kucace ukuthi kusivule amehlo ukuhlasela kweCovid-19,” kubeka uNksz Sibisi.
Uthe yize engakujabulelanga ukusuka lapho ababesebenzela khona kodwa bakwazile ukugcina sebekwamukelile ukushintsha kwesimo sokusebenzela ekhaya njengoba bebecabanga ukuthi bazothwala kanzima kumakhasimende ababecabanga ukuthi azokhononda ngokushintsha kwabo indawo.